ပဲခူးက ဘုရားတည်တဲ့ မယ်တော်ကြီး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » ပဲခူးက ဘုရားတည်တဲ့ မယ်တော်ကြီး
ပဲခူးက ဘုရားတည်တဲ့ မယ်တော်ကြီး
Posted by manawphyulay on Feb 18, 2012 in Local Guides, Photography | 13 comments
အလှူခံနေတဲ့ ပဲခူးက မြွေမယ်တော်ကြီး
အလှူက ရတာတွေနဲ့ ဘုရားတည်တယ်။
ဟဲ့ ဟဲ့ ဘယ်နှာတုန်း
မြွေကြီးပါဟဲ့ မြွေမှ တော်တော်အပျင်းကြီးတဲ့ စပါးကြီးမြွေကြီး
ဟီးဟီး မြွေသတ်အရပ်ဝေ ဆိုသလို ဟယ်ဟုတ်ပါဝူး ယောင်လို့ယောင်လို့ အာဘွားနော်အာဘွား
သူ့ခမျာလည်းသနားပါတယ် ပိန်တောင်နေတယ် ပချောင်နချောင်တွေတောင်ကျလို့
ဘုရားတည်တယ်ဆိုတော့ ကကောင်ဘလောင်တွေတောင်ဝယ်မစားနိုင်ပဲ နို့ပဲသောက်ထင်ပါရဲ့
သဂျီးကို ဖူးစေဂျင်တယ်…တခါထဲ မြွေမျိုခံရလည်း ပြီးရော….
အံမလေးကွယ်…။ မြွေက ဘုရားတည်မယ်လို့ ပြောသလား ?မြွေကပြောတာလား ?လူကပြောတာလား ? ခက်ကုန်ပြီ…။
လူတွေစဉ်းစားကြ လူတွေစဉ်းစားကြ လောကအတွက်……(ကိုကျော့် အသံဖြင့် ဆိုကြည့်ပါ)
ဟိုက် နည်းတဲ့မြွေကြီးမဟုတ်ပါလား။မမ မနောရေ။
မယ်တော်ဆိုတော့.. ယောက်ျားမပေးစားပဲ.. အဲလိုဖမ်းလှောင်ပြီး..မြွေပြငွေတောင်းလည်း… လူတွေကထည့်တာပဲလား..။
Updated 1/31/2012 8:40 AM
“What if the stock market had declined that much? Think of the adjectives you’d use for that,” says Gordon Rodda, an invasive-species specialist with the U.S. Geological Survey (USGS) who published research in 2008 showing that Burmese pythons could conceivably expand across the southern portion of the United States.
စပါးကြီးသည်းခြေစားချင်တယ်။ ကန်တော့နော် မယ်တော်ကြီး။
မျောက်ပြ ဆန်တောင်းဆိုတာဒါပေါ့ ဘယ်နှယ့် မြွေက မြွေပေါ့ သူလဲ ပြိသာာထဲမှာပါတာပဲ
ဒါဆို ဘာလဲ မယ်တော်ကြီးက ပြိသာာကြီးပေါ့ အော အော
၁ နဲ့ ၁ ပေါင်း၇င် ၂ ၇တယ်၇ှင်း၇ှင်းလေး ဘု၇ားတ၇ားတော်ကလဲ၇ှင်း၇ှင်းလေး အဲ့ဒါကို လူတွေက ၄ တွေ ၅ တွေ လုပ်ချင်ကြသေး
အင်း ခက်ကုန်ပီ။မျောက်ပြဆန်တောင်းတဲ့ ပြောကုန်ပီ။
ဒီလိုမျိုး အလှူငွေ လက်ခံတဲ့ မြွေကြီးတွေကို မင်းဘူး နဂါးပွက်
မြွေမယ်မယ်ကြီး.. ပိုက်ချံက မှိုတွေနဲ့ ၀ဲ တွေပေါက်ကုန်မယ်။
အဲဒီ ပိုက်ချံ တွေ ဒီပေး.. နွားနို့ ၁ပုလင်း နဲ့ လဲပေးမယ်။ (ဆင်တကောင်တွေ့လို့ ၁ပုလင်းပြောတာ.. ခြင်္သေ့ပဲ ဆိုရင် ၁ခွက်ပဲ ရမယ်.. ဒါမှ အမြတ်ကျန်မှာပေါ့အေ့..)
မနောရေ … အဲဒီ မြွေကြီး နာမည်က ဘယ်သူ၊ ဘယ်ဝါ၊ ဘယ်ဘုရားမှာ ရှိတာပါဆိုပြီး ပြောပေးဦးလေဗျာ။
ပဲခူးက ဘုရားတစ်ဆူမှာ ရှိတာတော့ သိတယ်။ ကျုပ်လည်း သွားမယ်၊ သွားမယ်နဲ့ ရောက်ဖြစ်သေးဘူး။ တစ်ခါတစ်ခါ အဲဒီ မြွေကြီးက ဘုရား ရင်ပြင်ပေါ်မှာတောင် လျောက်သွားနေတယ်လို့ ပြောတယ်။ ဟုတ်လားတော့ သိဘူး။
သူကြီးရေ မြွေခေါင်းကြည့်ရင် အမမှန်းသိပါတယ်။
အမေရိကားက သူ့အမျိုးတွေကိုလဲ ကယ်နိုင်မယ့်ပုံမပေါ်ပါဘူး။
သူကိုယ်တိုင်တောင် ထောင်ကျလဲခံရသေး၊ သားငါးလဲ အငတ်ခံရသေး၊ စကားမပြောတတ်တာကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး နာမည်ခံအလွဲသုံးစားလုပ်တာလဲ ခံရသေး…….။
ဒါထက် ဒီမြွေဒေါ်ကံဆိုးဟာ အရင် Etone တင်ဘူးတဲ့ ပိုစ့်ထဲက မြွေများလားမသိဘူး….။
သူ့ခမျာ ဘုရားတည်ပြီးရင်လဲ မသေမချင်း လှောင်ပြီးပိုက်ဆံအတောင်းခံရရှာဦးမှာ….